२ Current हालका लोगोहरू तपाईंलाई प्रेरित गर्न चयन गरियो क्रिएटिव अनलाइन
२ current हालका लोगोहरू तपाईंलाई प्रेरित गर्न
El लोगो यो ग्राफिक तत्व ग्राहकहरु द्वारा सबै भन्दा राम्रो परिचित छ। जब बजेट कडा हुन्छ र क्लाइन्ट सानो हुन्छ, हामीलाई एक लोगो बनाउनको लागि आमन्त्रित गरिन्छ: खास गरी जब यो ब्यापार वा प्रोजेक्टको बारेमा हुन्छ जुन जन्मँदै छ, र यसमा केही पनि छैन।
त्यो हो, यो अझै एक कर्पोरेट पहिचान छैन। ब्राण्ड छविको अभाव छ। "होईन, तर यदि यो लोगो बनाउन मात्र हो ..."। तपाईंले यो एक पटक भन्दा बढी सुन्नुभएको हुन सक्छ। यस बारे सचेत, र आवश्यक छ धेरै प्रेरित हुन जब यस प्रकारको असाइनमेन्टसँग काम गर्न तल झर्दै आउँदा, तल हामीले गत बर्षमा सिर्जना गरिएको कूल २ created लोगो चयन गरेका छौं तपाईलाई हेर्न, सिक्न, विश्लेषण गर्न र आलोचना गर्न।
धेरै भिन्न वर्तमान लोगोहरू
तल तपाईले केही चीज पाउनुहुनेछ, तर यो प्रमाणित गर्न अपरिहार्य छ टाइपोग्राफीको महत्त्व यी कामहरूमा। मलाई थाहा छैन किन, तर म ब्रान्डन निक्करसनको कामप्रति अत्यन्त आकर्षित छु। अधिक अनौपचारिक स्पर्शको साथ हामीसँग जुजन्ना रोगाट्टीको सिर्जना छ। हामी लगोगहरू पनि प्रदर्शन गर्छौं जुन निस्सन्देह, प्रतीक बलियो छ। जस्तो Jared Granger को मामला मा छ। कहिलेकाँही फन्टले नै प्रतीक राख्दछ, जस्तै क्रिस लाम्बोको। र हामीले यसलाई खोल्ने बित्तिकै पोष्ट बन्द गर्न ब्रान्डन निक्करसनले अर्को चयन गर्यो।
ब्रान्डन निक्करसन र लुइस समानीगो लोगो:
Zuzanna रोगाटी लोगो उनको कपडा ब्रान्ड को लागी:
Jared Granger लोगो। मलाई स्पष्टीकरण मन पर्छ।
क्रिस Labno लोगो, जो नकारात्मक अन्तरिक्ष संग खेल्छ। लोगो बनाउँदा एक धेरै सामान्य स्रोत।
ब्रान्डन निक्करसन लोगो फेरि:
यो तपाइँको लागि के हो सबैभन्दा गाह्रो लोगो उठाउँदा? सृष्टि प्रक्रिया कस्तो छ? सामान्य चीज दिमागमा छ, अवधारणा जसले चित्रमा चित्रण गरिएको ब्रान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ (वा एक अद्वितीय टाइपफेसको निर्माणमा प्रतिबिम्बित) र त्यसपछि यी सबैको पुनर्निर्माण र संश्लेषण। तपाई के गर्नुहुन्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » २ current हालका लोगोहरू तपाईंलाई प्रेरित गर्न